Tsy niakatra loatra : nahatratra 3% ny fidangan’ny vidim-piainana | NewsMada
Tsy niakatra loatra : nahatratra 3% ny fidangan’ny vidim-piainana
Latsaky ny 7% ny fidangan’ny vidim-piainana vinavinain’ny fanjakana amin’ity taona ity. Manodidina ny 3%-n’ny fidangany tato anatin’ny telo volana voalohany ny taona 2016.
Nampahafantarina ny alakamisy teo ny gazety boky mirakitra ny tabilao mikasika ny toekarena (TBE), laharana faha-22, avoakan’ny Ivontoerana misahana ny antontanisa (Instat). Ny taona 2010 ny voalohany, ary mivoaka isan-telo volana. Ahitana antontanisa samihafa avy any amin’ny loharanom-baovao mahatratra ny 22, mahakasika ny lafiny toekarena rehetra eto Madagasikara. Ao anatin’izany ireo minisitera sy ny rafi-panjakana voakasika, ny orinasa tsy miankina ary ny fikambanana tsy miankina sy ONG.
Anisan’ny fantatra fa manodidina ny 3% ny fidangan’ny vidim-piainana tato anatin’ny telo volana voalohany ny taona 2015. Raha ny voarakitra ao anatin’ny Tetibolam-panjakana 2016, latsaky ny 7% (6,9%) ny vinavinan’ny fanjakana amin’ity taona ity. Maro ny mety antony nahatonga io 3% io. Anisan’izany ny tsy fisian’ny rivodoza ka tsy simba ny vokatra, indrindra ny vary. Nidina koa ny vidin-tsolika ka tsy niakatra ny vidin-javatra amin’ny ankapobeny. Tamin’ny ankapobeny, marin-toerana koa ny lanjan’ny Ariary miohatra amin’ny vola vahiny. Misanda manodidina ny 3.600 Ar ny euros, raha 3.176 Ar ny dolara.
Fitaovana anaovana fanadihadiana
Nilaza ny tale jeneralin’ny Instat, Rajaonera Clément Ida, fa fototra ilaina sy antontam-baovao ny antontanisa. Tsy natao adika, fa fitaovana ilaina amin’ny fanadihadiana amin’ny sehatra samihafa.
Azo atao koa ny maminavina ny ho avy avy amin’ny zava-misy ankehitriny na ny teo aloha. Mikasika ny fanisam-bahoaka, tsy azo tanterahina izany raha tsy amin’ny taona 2017 satria tsy ampy ny tetibola eo am-pelatanana.